Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 30)
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa dhacdada Unpacked ee bisha Ogosto 13 iyadoo la soo bandhigayo Galaxy Note 5 iyo S6 Edge Plus
Munaasabada Samsung ee Unpacked ee bisha Ogosto 13, Samsung Galaxy Note 5 iyo Galaxy S6 Edge plus ayaa la filayaa in la soo bandhigo.
OnePlus 2 hadda waa rasmi: 4GB oo RAM ah iyo 64GB oo keyd ah oo loogu talagalay € 399 iyo 3GB / 16GB oo € 339
Waxaa si rasmi ah loo shaaciyey OnePlus 2 oo leh laba nooc, mid leh 3GB oo RAM ah iyo 16GB oo keyd ah oo u dhiganta 339 4 iyo kan kale 64GB / 399GB oo u dhiganta XNUMX XNUMX.
HTC Desire 626 ayaa timid Spain si ay ula tartanto Moto G
Terminal cusub oo heer dhexe ah oo ka socda soo saaraha fadhigiisu yahay Taiwan, HTC Desire 626, ayaa imaan doona Spain iyada oo ujeedkeedu yahay in ay la tartanto Moto G.
Kani wuxuu noqon doonaa S-Pen-ka Samsung Galaxy note 5
Waxaan awoodnay inaan aragno sida S-Pen-ka Samsung Galaxy Note 5 uu noqon doono, cunsur muhiim u ah xarafyada soo saaraha Kuuriyada Koofureed taasna waxay u muuqan doontaa qalabka lagu dhisay.
OnePlus 2 ayaa si buuxda u daadanaya saacado ka hor soo bandhigiddiisa
OnePlus 2 waxaa lagu sifeeyey si faahfaahsan saacado kahor soo bandhigideeda rasmiga ah.
Dib-u-eegista Isbaanishka ee Kaamiradda Wax-qabadka ee ka socota Xiaomi, the GoPro Hero 3 oo ka yar 100 Euros
Maanta waxaan kuu keenaynaa Dib-u-eegista iyo falanqaynta Xiaomi Yi Action Camera, kamarad ficil ama kamarad isboorti oo leh tilmaamo farsamo oo la mid ah GoPro Hero 3 oo aan ku heli karno wax ka yar 100 Euro.
OnePlus wuxuu furaa boos celinta martiqaadyada si loo helo OnePlus 2
Waxaa jira maalmo aad u yar si loo ogaado casriga xiga ee bilowga shiinaha yar. Taasi waa sababta OnePlus u furay boos celinta martiqaadka.
Falanqaynta Ulefone Be Touch 2, guud ahaan Octa Core iyo 3Gb RAM oo kayar 170 Euros
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa Dib-u-eegista iyo Falanqaynta dhameystiran ee Ulefone Be Touch 2, oo ah terminal Android oo leh astaamo heer sare leh oo qiimo jaban ku fadhiya.
Samsung waxay xaaqaysaa nooca 128GB ee Galaxy S6 iyo S6 Edge
Dib-u-habeynta aaladaha ay fulisay Samsung ayaa ka dhigtay 128GB nooca Galaxy S6 iyo Galaxy S6 Edge ficil ahaan.
1.5 milyan OnePlus Ones ayaa la iibiyay tan iyo markii la bilaabay
OnePlus 2 ayaa la soo bandhigi doonaa. Toddobaadka soo socda waxaan ogaan doonaa dhammaan sirta calanka cusub ee soo saaraha Aasiya.
Sawirada ugu horreeya ee Samsung Galaxy Note 5 waa la sifeeyey
Waxaan horeyba uheynay sawirradii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy Note 5 iyo cusub ee Galaxy S6 edge +, oo xaqiijin kara imaanshahooda bisha Ogosto 13.
Fikradda Sony ee loogu talagalay Android: Android saafi ah oo leh barnaamijyo iyo astaamo Sony ah oo hooyo ah
Android saafi ah ayaa kugu sugaya agagaarka geeska oo leh Xperia Z3 oo leh 'fikrad cusub' ee cusub ee Sony.
OnePlus 2 wuxuu maraa TENNA isagoo xaqiijinaya dhamaan astaamaha farsamo
Oneplus 2 wuxuu marayaa TENNA oo muujinaya dhammaan astaamaha farsamo ee astaanta cusub ee soo saaraha Aasiya
Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy Tab S2 8.0 iyo Galaxy Tab S2 9.7
Soo saaraha Kuuriya ee Samsung horeyba wuxuu u heystaa laba kaniini oo cusub oo diyaar u ah bisha soo socota iyadoo ay la socdaan Galaxy Tab S2 8.0 iyo Galaxy Tab S2 9.7.
Maanta waxaan ku sharaxayaa talaabo talaabo talaabo ah sida loo furo Bootloader-ka Huawei P8 Lite ogolaanshaha iyo ogolaanshaha shirkada Huawei lafteeda.
Mo Versi ayaa xaqiijiyay in HTC One M8 uu heli doono casriyeyn ku socota Android M. Date? waxaa la filayaa Janawari ama Febraayo 2016
Sida loo cusbooneysiiyo Soo-celinta TWRP ee Lenovo K3 Xusuusin qaabkeeda 2.8.6 Qaabka Naqshadeynta Qalabka
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo cusbooneysiiyo Soo-celinta TWRP ee Lenovo K3 Note si aad ugu dhaafto nooca 2.8.6 oo wadar ahaan ah Naqshad Qalabka.
Hagaag, waxay umuuqataa haa, Meizu iyo Nokia inay shuraako ku noqon doonaan suuqa taleefanka
Meizu waxay u dirtay casuumaad taxane ah soo bandhigida Meizu M2 taas oo ay si cad ugu qancinayso Nokia
Meizu ma noqon doonaa lammaanaha cusub ee Nokia?
Meizu wuxuu noqon karaa xulafada cusub ee Nokia, qaasatan hadii aan tixgalino shaashaddii ugu dambeysay ee ay daabacday
Evleaks wuxuu sifeeyaa tilmaamaha Huawei Nexus: 5,7 screen shaashadda QuadHD, Snapdragon 820 chip iyo jirka birta
Huawei waxay soosaaraysaa Nexus cusub oo imaan doonta rubuca ugu dambeeya sanadka iyadoo shaashaddiisu tahay 5,7-inch oo xalka QuadHD ah.
Miyaa Yurub laga tegayaa iyada oo aan la bilaabin bilowgii hore ee Galaxy Note 5?
Bilowgii ugu horreeyay ee Galaxy Note 5 ayaa dib uga dhici kara Yurub. Xogtu waxay xaqiijineysaa inaysan imaan doonin 21-ka Ogosto qaaradda.
Dhacdada Samsung ee aan xirxirneyn waxay noqon laheyd Ogosto 12, 2015
Dhacdada Samsung Unpacked ee soo socota bisha Ogosto 12, 2015 ayaa ku dhow in la xaqiijiyo.
ZTE Axon wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay 5,5 810. shaashadda QuadHD, Snapdragon 4 chip iyo XNUMXGB oo RAM ah
Shirkadda ZTE ayaa si rasmi ah u shaacisay shirkaddeeda cusub ee ZTE Axon oo ay la socoto Snapdragon 810 chip, 5,5 "shaashadda QuadHD iyo 4GB oo RAM ah.
Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa talaabo talaabo ah sida loo xidido Lenovo K3 Note si fudud oo ay ku jiraan wax walboo aad u baahan tahay.
5 Nexus 2015 lama tartami karo AnTuTu
Haddii macluumaadka ka imanaya barnaamijka waxqabadka AnTuTu uu run yahay, 5 Nexus 2015 lama tartami karo.